Faa'iidooyinka 7 ee ugu sarreeya ee Semax ee ay tahay inaad ogaatid kahor isticmaalka - Phcoker
Faa'iidooyinka 7 ee sarreeya ee Semax ay tahay inaad Ogaato Kahor Adeegsiga
1. Waa maxay Semax Peptide?
2. Codsiga Semax
3. Faa'iidooyinka Semax
4. Sidee Semax u shaqaysaa?
5. Sideen u isticmaalaa Semax?
6. Ma jiraan waxyeellooyin dhinaca dawooyinka ah markaad isticmaasho Semax?
7. Ma u baahan tahay inaad isticmaasho xidhmada Semax markaad isticmaaleyso?
8. Maxay ku kala duwan yihiin Semax vs Selank?
9. Halkeen ka heli karaa Semax khadka tooska ah?
Semax waxaa lagu soo saaray 1980s iyo 90s, ka dib ayaa markii dambe lagu oggolaaday Russia in lagu daweeyo dhibbanayaasha istaroogga, dhaawaca maskaxda iyo xumaanshaha garashada. The Semax peptide ayaa lagu soo rogay daraasado kala duwan oo bini aadamnimo gudaha Russia, waxayna cadeysay inay lahaato garashada kor u qaadida guryaha.
Dhanka kale, waxaa sidoo kale jira natiijooyin caafimaad oo la diiwaangeliyay oo ku filan sida dawadu ay sidoo kale gacan uga geysan karto yareynta walwalka iyo sidoo kale kor u qaadida niyada qofka isticmaala. Semax waxaa loo isticmaalaa sida nootropic caadiga ah, laakiin waxay sidoo kale leedahay adeegsiyo dheeri ah sida kobcinta caafimaadka maskaxda iyo kor u qaadida nidaamka difaaca ee howlaha kale. Faa'iidooyinka Semax waxaa kaliya oo la dareemi karaa marka daawada si sax ah loo qaato. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad ka hesho hagitaanka isticmaalka dhakhtarkaaga natiijooyin wanaagsan iyo khibrad wanaagsan.
Semax (80714-61-0) waa daawo loo yaqaan 'peptide' oo laga soo saaray Ruushka gudaha 1980s si looga caawiyo daaweynta iyo xakamaynta ciladaha sida istaroogga. Maanta, walaaca Semax wuxuu ku qoran yahay liiska Ruushka ee dawooyinka lagama maarmaanka ah ka dib markii la caddeeyo waxtarkiisa ku aaddan daaweynta xaaladaha caafimaad ee kala duwan.
Dhakhaatiirtu waxay sidoo kale u qoraan Semax inuu yahay daawo nootropic ka dib markay garteen inay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaari karto hagaajinta waxqabadka xusuusta iyo yareynta buufiska. In kasta oo Ruushka iyo Ukraine ay oggolaadeen adeegsiga dawadan, haddana waddamada kale sida Mareykanka ee Mareykanka ayaan wali aqbalin in kasta oo ay caddeeyeen inay muhiim u yihiin daaweynta xaaladaha caafimaad ee kaladuwan. Si kastaba ha noqotee, taasi kama horjoogsaneyso isticmaalka budada Semax.
Marka laga reebo budada caadiga ah ee "Semax budada", waxa kale oo jira laba kala duwanaansho oo laga heli karo suuqa, laakiin waxay ku dhowaad si isku mid ah uga shaqeeyaan. Waxay ka mid yihiin Na-Semax-Amidate iyo N-Acetyl. Waqtigaan la joogo, ma jiro daraasad ballaaran oo la sameeyay ama lagu diiwaangeliyay labada nooc ee Semax. Si kastaba ha noqotee, dib-u-eegista Semax, qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa soo sheegaya in Na-Semax-Amidate ay awood u leedahay kor u qaadista diiradda halka N-Acetyl Semax ay tahay mid aad u xoog badan. Natiijooyinka Semax way u kala duwanaan karaan shaqsiyaadka midba midka kale, iyadoo kuxiran sida jirku uga jawaabayo qiyaasta. Waxa kale oo aad xor u tahay inaad tijaabiso mid ka mid ah noocyada 'Semax' laakiin aad hubiso inaad ku lug yeelato dhakhtarkaaga geedi socodka qaadashada oo dhan.
The Budada Semax waxaa laga heli karaa dukaamo kala duwan oo internetka ah iyo dukaamo jireed oo kugu xeeran halkaas oo aad ku dalban karto amarkaaga wakhti kasta. Ka iibso Semax iibiyaha ama iibiyaha la isku halleyn karo oo khibrad leh. Ma aha in iibiyayaal daroogo kasta keena alaab tayo leh, oo had iyo goor waa fikrad fiican in la barto alaab-qeybiyeyaasha Semax ka hor intaadan dalban amarkaaga. Fahmida sida dukaanku u shaqeeyo iyo inta ay qaadanayso kahor intaadan helin Semax (80714-61-0).
Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad tagto baadhitaan caafimaad ka hor intaadan bilaabin qaadashada dawadan. Semax iibintu waa dawo dawo la qoro, sidaa darteedna, dhakhtarkaagu waa inuu noqdo qofka ku habboon ee kuu dejiya dawada saxda ah ka dib markuu baarto xaaladaada. Hawsha daaweynta sidoo kale waxay u baahan tahay inuu kormeero xirfadyahan caafimaad si natiijooyin wanaagsan loo helo.
Markaad iibsato Semax (80714-61-0), dhig dhig meel aysan carruurtu gaarin oo qaboojiyaha maaddaama ay u burburi karto sida peptides kale. Si ka sii wanaagsan, waayo-aragnimada Semax, hubi inaad u hogaansanto dhammaan tilmaamaha qiyaasta daawada. Weligaa ha isku hagaajin qiyaasta adiga oo aan u sheegin dhakhtarkaaga.
Sidii hore loo sheegay, Semax peptide wuxuu muhiim u ahaa adduunka caafimaadka, gaar ahaan daaweynta xaaladaha kala duwan. Ruushka gudaheeda, dawada ayaa la ansixiyay ka dib markay ogaatay inay ka caawin karto xakameynta ciladaha wareegga sida istaroogga. Si kastaba ha noqotee, daraasadaha Semax ee la sameeyay sanadihii la soo dhaafay ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday cuduro kale oo daroogada ay si guul leh u daaweyn karto.
Wadamo kala duwan ama dhakhaatiir ayaa adeegsada Semax si loogu daaweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan. Walwalka 'Semax walwalka' waxaa lagu dabaqayaa si toos ah, laakiin dhibcaha kaliya ayaa ku kala duwan iyada oo kuxiran xaalada caafimaad ee daaweynta. Waxa kale oo jira foomka la isku duro ee 'Semax' kaas oo ay tahay inuu keliyo xirfadle caafimaad. Had iyo jeer xasuuso inaad ku keydiso daawada qaboojiyaha.
Semax waa nootropic kaasoo cadeeyay inuu aad waxtar ugu leeyahay maskaxdaada siyaabo kaladuwan uga caawiya. Tan iyo markii Semax loo oggolaaday isticmaalka dawooyinka ee 2011, daroogada waxaa loo isticmaalay in lagu daaweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan. Markii si sax ah loo qaato, daroogadu waxay keeni kartaa dheefaha soo socda;
1. Wuxuu adeegsadaa Calaamadaha ADHD
Semax waxay leedahay saameyn ka caawisa daaweynta calaamadaha ADHD. Daraasado caafimaad ayaa muujinaya in Semax ay horumariso xusuusta oo ay kordhiso neurotransmitters, kuwaas oo badanaa ku yar dadka qaba ADHD. Waqtigaan, Semax waa daaweyn kale oo loogu talagalay carruurta leh ADHD ee Ruushka. ADHD waa xaalad horumarin ku jirta taasoo khalkhal ku keeni karta heerarka dopamine-ka, iyo Semax waxay cadeysay inay qayb weyn ka qaadatay wax ka qabashada dhibaatada.
2. Waxay ka hortageysaa burburka Oxidative
Asal ahaan, Semax waxaa loogu talagalay inay ka caawiso wadne istaagga iyo dhibbanayaasha istaroogga. Muddo sanado ah, dawadu waxay waxtar u lahayd xakameynta iyo kahortagga xumaanshaha habdhiska jirka. Waxyeellada Oxid waxay sabab u tahay walwalka 'oxidative stress', oo ah isu dheelitir la'aanta xag-jirka iyo antioxidant-ka jirkaaga. Cadaadiska khafiifka ah ee jirka ka yimaada jimicsiga jirka ayaa sidoo kale gacan ka geysta xakameynta koritaanka unugyada maadaama ay kiciso soosaarka antioxidant.
Si kastaba ha noqotee, walaaca kaabayaasha jirka ee daba dheeraada ee ay sababaan cudurada ama xaaladaha sida istaroog waxay ku keenaan waxyeelada borotiinka, unugyada jirka, iyo DNA. Sida laga soo xigtay Daraasadaha Semax, ku darista daroogada ee dawooyinka maskaxda istaroogga waxay saameyn weyn ku yeelatay soo celinta xaddiga howlihii neerfaha ee waxyeelo soo gaartay. Saameyntani waxay ka caawineysaa dhibbanayaasha istaroogga inay ka fogaadaan dhibaatooyinka murqaha, maskaxda iyo isha.
3. Waxay ka caawisaa dhimista buufiska
Welwelka wuxuu sababi karaa xaalado badan sida cudur, hurdo la'aan, ama dhaawac jireed. Jidhka bini aadamka way kala duwan yihiin, sidaa darteedna, waxay waliba ula dhaqmaan walaaca si ka duwan sidii hore. Tusaale ahaan, jidhka dadka qaarkood ayaa ka jawaaba walaaca iyagoo kordhinaya wax soo saarka enzymeska beerka. Daraasadaha ayaa muujiyay in Semax ee diiqadda yareynta wax soo saarka enzyme beerka markii loo maamulo xoolaha inta lagu gudajiro cilmibaarista. Dhanka kale, xirfadleyaasha caafimaadku waxay caddeeyeen in Semax ay caadi u tahay isbeddelada jirka ee ka dhasha culeyska ka yimaada dhaawaca jireed.
4. Waxay kordhisaa wareegga dhiigga
Halista ugu halista badan ee istaroogga waa la'aanta ama daciifinta wareegga dhiigga ee maskaxda, xaalad loo yaqaanay yaraanta cudurka maskaxda. Isticmaalka Semax ee daaweynta istaroogga ayaa dhajiyay natiijooyin wanaagsan iyadoo la hagaajinayo wareegga dhiigga ee maskaxda. Dawadani sidoo kale waxay saameyn ku leedahay kahortaga wadnahaaga inuu koraan marka aad qabtid dhiig karka. Taas bedelkeed, tani waxay kaa ilaalinaysaa inaad ku dhacdo wadno xanuun kasta, xitaa haddii aad kuleylka kujirto.
5. Waxay soo bandhigaysaa Xaqiiqda Maskaxda ee Maskaxda (BDNF)
BDNF waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa badbaadada neurons, horumarka garashada, iyo caagga jilicsanaanta. Heerarka hooseeya ee BDNF waxay kuu horseedi karaan ama xitaa uga sii dari karaan niyad jab iyo walaac. In kasta oo ay kuu soo bandhigto waxyeelooyinka ugu yar, Semax wuxuu kaloo cadeeyay inuu yahay BenderN fiican xoojiya isla markaana ka hortaga daawada. Daawadu waxay horumarin kartaa wax soo saarka BDNF iibsashada ilaa 800%.
Iyada oo la kordhinayo wax soo saarka BDNF, Semax waxay ka caawisaa xakameynta iyo fududeynta walwalka iyo niyadjabka. Daraasadaha caafimaad ee ka hortagga niyad-jabka ayaa caddeeyay sida heerarka sare ee BDNF ay saameyn wanaagsan ugu leeyihiin yareynta niyad-jabka. Semax waxay kicineysaa soo-dhoweyaasha habka limbic si ay u soo saaraan adenosine, dopamine, serotonin, iyo histamine, kuwaas oo ka caawiya cilmiga loo yaqaan 'Easi'
calaamadaha la xidhiidha ADH, walwal, iyo niyad jab. Kordhinta dhammaan neurotransmitters-kayadan waxay xoojineysaa dhiirigelinta, sidaas darteedna waxay xoojineysaa diiradda iyo wax soo saarka.
6. Semax waxay kaa caawin kartaa yareynta xanuunka
Marka aad la kulanto xanuuno qaar, maskaxdaada ayaa si isdaba joog ah u sii deyn doonta neurotransmitters-ka loo yaqaan 'Enkephalins', taasoo kadhigaysa dareenka xanuunka. Waxay sidoo kale beddeshaa garashada xanuunka iyadoo la yareynayo dareemada argagaxa ee ku dhaca markaad xanuun dareento.
Enkephalins waxay xakameyn kartaa jirka oo keliya xannuun waqti; Sidaa darteed, Semax waxay ka caawisaa ka hortagga burburka iyo sidoo kale kordhinta wax soo saarkooda. Sidaa darteed, ka caawinta yareynta xoogga xanuunka ee jirkaaga muddo dheer taasna waxay Semax ka dhigeysaa xanuun baabi'iye awood leh.
7. Semax waxay hagaajineysaa xifdinta xusuusta
Neurotransmitters sida enkephalins waxay saameyn ku yeeshaan aragtida, markii la kordhiyana waxay door muhiim ah ka ciyaaraan abuurida xasuusta iyo habeynta niyadda. Daraasad caafimaad oo laga sameeyay Russia, oo ku saabsan shaqaalaha caafimaadka qaba, Budada Semax waxay xoojiyeen feejignaantooda iyo haynta xusuustooda. Daraasadaha sayniska waxay soo jeediyeen in kor u qaadida wareegga wareegga dhiigga iyo ka hortagga sunta ee maskaxda maskaxda aadanaha ay kor u qaaddo xusuusta.
Kordhinta heerarka BDNF ee hippocampus ayaa sidoo kale la sheegay inay muhiim u tahay hagaajinta xusuusta maxaa yeelay hippocampus waa xarunta maskaxda ee shucuurta iyo xusuusta. Dhanka kale, BDNF waxay kaloo ka caawisaa kor u qaadista xusuusta, xusuusta, iyo awooda barashada iyo xajinta macluumaadka cusub. BDNF waxay kicisaa wax soo saarka Neurogenesis, oo ah jiil wadooyin dareemayaal ah oo maskaxda ka caawiya hagaajinta shaqada maskaxda iyo socodsiinta.
Semax waa dawo awood leh iyo dawo marka loo isticmaalo in lagu daaweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan. Mar alla markii ay gasho nidaamka jirkaaga, Semax waxay kordhisaa heerarka maskaxda ka soo baxda (BDNF) iyo waxtarka sidoo kale.
Saynis ahaan, BDNF waa borotiinno dhiirrigeliya caafimaadka maskaxda guud ahaan iyagoo ilaalinaya isla markaana xoojinaya unugyada maskaxdaada, kobcinta korniinka unugyada maskaxda, iyo kobcinta guud ahaan maskaxda maskaxda. Badanaa, nootropic kasta oo kordhiya heerarka BDNF wuxuu kobciyaa garashada garashada isticmaaleyaal badan, iyo Semax waxay cadeysay inay tahay tusaale fiican oo awood BDNF ah oo awood dheeraad ah lagu xoojinayo.
Xaaladaha qaarkood, Semax stack waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo niyadda iyo daawo loo nasto. Taasi waa sababta oo ah waxay sidoo kale kordhineysaa waxqabadka dopamine iyo serotonin ee jirkaaga ku jira, kuwaas oo ah neurotransmitters-ka oo saameyn weyn ku leh welwelka iyo niyad-jabka. Sanadihii la soo dhaafay, dhakhaatiirta caafimaadku waxay sii wadeen helitaanka xaalado caafimaad oo kala duwan oo wax looga qaban karo Semax.
Qiyaasta semax waxay kuxirantahay xaalada caafimaad ee daweynta, iyo qaddarka waa inuu dejiyaa xirfad yaqaan caafimaad. Waxaa lagu taliyay Qiyaasta Semax waxay u dhexaysaa 300mcg illaa 600mcg. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaasha cusub waxaa lagula talinayaa inay ku bilaabaan qadar yar, oo dhaqtarka dib loo hagaajin karo goor dambe ka dib markaad la socoto jawaabta jirkaaga ee daawada.
Daroogada, qofna ma aha inuu halis ugu galo qaadashada qiyaasta sare bilawga maxaa yeelay waxay u horseedi kartaa waxyeelo daran. Si looga fogaado khatar kasta oo la xiriirta dawadan sida timaha Semax waa markasta fikrad fiican inaad u tagto baaritaan caafimaad ka hor intaadan qaadan dawadan sabab kastoo ay doonto ha noqotee.
Semax waxaa badanaa loo qaataa si toos ah, waana inaad ku qaadataa oo keliya 2 ama 3 dhibco yar yar sanka kasta laba ama saddex jeer maalintii meertada uu dhakhtarku dhigay. Shuruudaha qaarkood sida markaad qaadatid Semax muddada soo kabashada ka dib daaweynta, waa inaad u qaadataa dhibcaha 4 sanka kasta, lix jeer maalintii. Xusuus-qorka narcosis ama cilad-qaadista feejignaanta, qiyaasta lagu taliyey waa xNUMX dhibcooyin sanka kasta saddex jeer maalintii. Semax ee diiqadda 3 ilaa 2 waxay ku dhacdaa sanka kasta, sedex jeer maalintii waa qiyaasta lagu taliyay.
Sida ugu habboon, Qiyaasta duriinka Semax waxay ku xirnaan doontaa xaalada caafimaad ee daweynta. Si kastaba ha noqotee, ku dheji tilmaamaha qiyaasta daawada ee dhakhtarku maaddaama soo-jeedinta soo-saaraha laga yaabo inaysan adiga kuu shaqeyn. Isticmaalayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay helaan natiijooyin tayo leh ka dib markay qaataan qaadasho yar, halka kuwa kalena ay qaadan doonaan qiyaaso aad u sareeya si ay u helaan saameynta ay rabaan. Taasi waa ifafaale caadi ah maadaama awooda jidhka bini aadamka uu midba midka kale ugu duwan yahay.
a) Duritaanka Semax
Semax waxaa sidoo kale lagu siin karaa cirbad, taasoo noqon karta qiyaasta ugu fiican ee isticmaaleyaasha aan ku qanacsaneyn buufinta sanka. Labada Semax Nasal buufis iyo foomamka duritaanka hoostiisa ayaa loo isticmaalaa ulajeedooyin isku mid ah oo keliya inay ku kala duwan yihiin codsigooda.
Dhakhtarkaagu wuxuu kaa codsan karaa inaad doorato hal foom qaadasho oo u dhexeeya labada. Badanaa, qiyaasta cirbadaha ayaa xoog badan marka loo eego nooc kasta oo kale oo ah Semax. Markaa uma baahnid inaad si joogto ah u qaadatid duritaanka sida sanka oo ah sanka oo ay tahay inaad labo ama saddex jeer maalintii ama ka badan qaadatid.
b) Qiyaasta la isku duro ee Semax
Sida ugu badan Duritaanka Semax waxay ku siineysaa ikhtiyaar u fiican qiyaasta sanka, had iyo jeer hubi inaad ka qaadatid cirbadaha dhakhtarkaaga. Shuruudo kaladuwan ayaa ku baaqaya qiyaaso kaladuwan. Baadhitaan caafimaad ayaa waliba hagaysa dawadaada dejinta qiyaasta kugu habboon. Qiyaasta Semax waa inuu ahaadaa inta udhaxeysa 300mcg ilaa 600mcg.
Qiyaasta daawada waa la sii yareyn karaa iyadoo ku xiran sida jirkaagu uga jawaabayo cirbad-qaadista Semax ee ugu horreysa xitaa xitaa kor loogu habeeyey. Haddii aadan hubin inaad isku durisid, waxaad weydiisan kartaa dhaqtarkaaga inuu ku tababarto ama jadwal u yeesho booqashooyinka caadiga ah si aad u qaadatid qiyaastaada. Ha ku darin halista naftaada haddii aadan aqoon sida loo sameeyo maadaama ay kuu horseedi karto dhibaatooyin kale oo caafimaad.
Semax ma ahan daawo caan ka ah Mareykanka dhexdeeda maxaa yeelay FDA ma aysan oggolaanin tan iyo markii la soo saaray. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray baaritaano badan iyo tijaabooyin badan oo laga sameeyay Russia kuwaas oo cadeynaya waxtarka Semax.
Dawada ayaa soo bandhigtay tijaabooyin caafimaad oo kala duwan oo bini’aadanka laga sameeyay, iyo ku dhawaad ​​dhamaan baaritaanada waxay soo wariyeen inaysan jirin wax waxyeelo ah oo dhanka Semax ah. Taasi waxay ka dhigeysaa Semax mid ka mid ah nabdoonaanta ugu nabdoon suuqa maanta. Ruushka, Semax wuxuu waxtar u lahaa daaweynta xaalado caafimaad oo kala duwan sida madax xanuunka dhanjafka, madax-dhiigfuranka, iyo ciladaha garashada.
Qaybta ugu yaabka badan ee daroogadaani waa in ay leedahay awood sare, laakiin xitaa marka lagu qaato qaadasho aad u sarreysa, waxaa laga yaabaa inaysan jirkaaga u noqon wax sun ah. Si kastaba ha noqotee, Semax uma adeegsan dad badan oo ka baxsan Ruushka ilaa dhowaan markii Ukraine ay oggolaatay isticmaalkeeda. Heerka dulqaadka jirkaaga ayaa waliba go'aamin kara, natiijooyinka Semax ee aad heli doontid ka dib qaadashada daawada.
Qaar ka mid ah waxyeelada yar yar ee Semax waxaa soo sheegay qaar ka mid ah adeegsadayaasha Semax sida afka qalalan, dhididka oo kordha, lallabbo, iyo hurdo la'aan. Semax iyo timo luminta ayaa sidoo kale ah saameyn kale oo caadi ah oo ay soo tebiyaan qaar ka mid ah dadka isticmaala Semax. Dhamaan waxyeeladaan dhif ayaa la soo sheegaa, laakiin daawada ayaa xakameyn karta. Jidhka bini aadamka way kala duwan yihiin, oo haddii ay dhacdo inaad la kulanto waxyeellooyin kale oo daran Semax waa inaad isla markiiba u sheeg dhakhtarkaaga caawimaad.
Caadi ahaan, Semax waxay keenaysaa natiijooyin tayo leh markii kali loo isticmaalo daaweynta xaaladaha caafimaad ee kala duwan. Si kastaba ha noqotee, sida nootropics-ka badan, waxaad heli kartaa waxtarka ugu badan ee Semax marka aad ku qaadatid xidhmooyin. Kratom, oo isna ah meel kale oo caan ku ah suuqa oo loo adeegsado kicinta iyo kicinta, ayaa si fiican u dhigaysa Semax. In alla inta Semax ay is dejin karto oo ay quwad galin karto isticmaaleyaasha, iyadoo la qaadaneyso Kratom waxay sare u qaadeysaa saameynta la doonayo.
Waxaa lagugula talinayaa inaad ka fiirsato inaad Semax ku tuurto Phenylpiracetam sababtuna tahay burburka tamarta ee ay sababi karto adigoo dawadan u qaadanaya wax kiciya. Phenylpiracetam waa garasho heer sare ah oo kobcisa nootropic laakiin si tartiib tartiib ah wax u qabta. Dhanka kale, isticmaaleyaal badan ayaa soo sheegay inay helayaan faa iidooyin badan oo Semax ah markii ay isku daraan waxyaabaha kale ee kiciya sida curcumin kaasoo u oggolaanaya socodka jirka ee tamarta joogtada ah.
Loogu tala galay isticmaaleyaasha Semax ee la soo dersay walaaca badan waa inay ka fiirsadaan isku darka daroogada Ashwagandha, oo u adeegta nasasho. Ashwagandha waa awood Nootropic kaas oo kaa caawin kara qaboojinta xaalada walaaca ee Semax.
Isku soo wada duuboo, Semax waxaa lagu dhejin karaa nootropics kala duwan si loo kordhiyo natiijooyinka la filayo. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan hubin waxa nootropic-ka ah ee aad iskugu dari karto Semax, had iyo jeer kala tasho dhaqtarkaaga. Xidhista qaldan ayaa aad khatar ugu ah caafimaadkaaga maxaa yeelay waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo daran.
Semax iyo Selank waa dhamaan nootropics Russia, mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xaaladaha caafimaad ee la midka ah sida isku dheellitirka iyo walaaca. Natiijooyinka ugu badan, labada daawo sidoo kale waa loo isticmaali karaa si wada jir ah. Selank waa 'anxiolytic peptide' oo yareynaysa dhibaatooyinka ba'an ee walaaca waxaana lagu yaqaanaa inuusan keenin waxyeellooyin xun sida Semax.
Qaab ahaan, Selank waxaa laga soo qaatay 'endogenous tetrapeptide Tuftsin', kaas oo door muhiim ah ka ciyaara nidaamka difaaca jirkaaga. Si loo dheereeyo saamaynta Selank loona yareeyo burburka peptide, soosaarayaashu waxay ku soo darsadeen Glyproline qaab dhismeedkeeda.
Qaabka waxqabadka Selank ee maskaxda sidoo kale waa mid aad u gaar ah; Waxay u adeegtaa sidii dawada walaac-xumida oo ay la socoto kahortaga astaan-galinta iyo ka hortagga niyad-jabka taasoo sare u qaadeysa howlaha garashada iyo xusuusta. Sidaa darteed, Semax vs Selank waa laga doodi karaa, laakiin labada daroogoodba waa xoojiyayaal waxgarad ah. Selank waxaa loo qaataa si toos ah, iyo qiyaasta daawada way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran xaalada daawo qaadashada.
Labada dawooyin waxay ku kala duwan yihiin sida loogu isticmaalo daaweynta dhibaatooyinka caafimaad ee kala duwan. Semax waxay awood u leedahay hagaajinta garaadka iyo niyad jabka, halka Selank ay bixiso natiijooyin tayo leh markii loo isticmaalo walaaca fekerka. Si kastaba ha noqotee, labadaba daroogooyinka waxay kordhiyaan heerarka BDNF, mararka qaarkoodna waa la iskudhigi karaa, sidaan horayba u soo sheegnay. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Semax vs Selank kala tasho xirfadle caafimaad.
Haddii aad joogtid Ruushka, Semax waxaa lagu iibiyaa warqad dhakhtar qoray. Si kastaba ha noqotee, gudaha Mareykanka ee Maandooriyaha, daroogada ayaa ka yar nidaaminta, in kasta oo FDA aysan aqbalin. Taas macnaheedu waa inaad ka heli karto adoo galaya barta internetka ee nootropic. Waxaan had iyo jeer kula talinaa dadka isticmaala Semax inay taxaddar muujiyaan oo ay waqtigooda ku qaataan sidii ay ku heli lahaayeen alaab-qeybiye Semax ugu wanaagsan. Samee baaritaankaaga, hubi macaamiisha dib u eegista si ay u fahmaan sida alaab-qeybiyaha Semax u shaqeeyo ka hor intaadan sameynin amarkaaga. Xusuusnow, iibiyaasha Semax kasta oo aad ka hesho suuqa lama aamini karo.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah inaan nahay hogaamiyaha shirkada Semax ee gobolka. Waxaad ku samayn kartaa dalabkaaga boggayaga internetka waxaadna hubin doontaa inaad ku soo hesho badeecadaada waqtiga ugu gaaban ee ugu macquulsan. Semax for sale iyo Semax stack ayaa dhammaantood laga heli karaa dukaankayaga saaxiibtinimo ee internetka ku habboon.
Waxaan nahay daryeele Bixiyeyaasha budada Semax, oo sidaas darteed, waxaan uga digayaa dhammaan macaamiisheena qiimaha ku haysa qaadashada daawooyinka annaga oo aan marin baaritaan caafimaad ama aan ku lug lahayn xirfadle caafimaad dhammaan wareegga qiyaasta. Sidoo kale, u sheeg dhaqtarkaaga isla markaaba inaad la kulanto waxyeellooyin daran.
Dolotov, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, & Grivennikov, IA (2015). Semax wuxuu ka hortagaa geerida xanuunka 'tyrosine hydroxylase-positive neurons' oo ah isku dhafan dhaqameedka unugyada neerfaha ee ka soo baxay embryonic rat mesencephalon isagoo ku dayashoonaya 6-hydroxydopamine-ga oo uu ku dhacay neurotoxicity. Joornaalka Neurochemical, 9(4), 295-298.
Koroleva, SV, & Myasoedov, NF (2018). Semax oo ah Dawada Guud ee Daaweynta iyo Cilmi Baadhista. Buug-yaraha Bayoolajiga, 45(6), 589-600.
Manchenko, DM, Glazova, N., Levitskaia, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, & Miasoedov, NF (2010). Saamaynta Nootropic iyo falanqaynta 'Semax' ka dib dariiqyada kala duwan ee maamulka. Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023.
Malyshev, AV, Razumkina, EV, Dubynin, VA, & Myasoedov, NF (2013, May). Semax wuxuu saxayaa unugyada maskaxda ee sababa hor u dhaca dhalmada kahor ee astaamaha valproic. Gudaha Doklady cilmiga bayoolaji (Vol. 450, No. 1, p. 126). Saxaafadda Springer Science & Ganacsiga.
Cirbadda Acetate Acetate / Powder: Xageen ka heli karaa?
Budada Peptide Degarelix: Dawada dhabta ah ee loo isticmaalo Kansarka Qanjirka 'prostate'